यदि तपाईलाई पत्थरी भएको छ भने यसरी घरेलु औषधी प्रयोग गरि निकालौ - ज्ञानविज्ञान
यदि तपाईलाई पत्थरी भएको छ भने यसरी घरेलु औषधी प्रयोग गरि निकालौ
कागतीको रस (६० मिलिलिटर) र ६० मिलिलिटर ओलिव ओइल मिसाउने । मिक्स गरिसकेपछि यसलाई पिउने । यसको लगातार सेवनले केहि दिनमै पत्थरीलाई हटाउँछ। कागतीको रस र ओलिव ओइल हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि निकै फाइदाजनक र लाभदायी सामग्री हुन्।
एउटा प्याजलाई सानो सानो टुक्रामा काटेर पिस्ने । प्याज पिसेर पेस्ट बनिसकेपछी एक सुतीको कपडा अथवा छान्ने प्रयोग गरेर पेस्टबाट रस निकाल्ने । यो रसलाई बिहान खाली पेटमा पिउने। यसरी प्याजको रस नियमित रुपमा पिउनले पत्थरीलाई सानो सानो टुक्रामा निकाली केहि दिनमै पूर्ण रुपमा हटाउँछ।
पत्थरी निकाल्नको लागि यो एक लाभदायी चिया हो।यदि तपाईलाई पत्थरी भएको छ भने यसरी घरेलु औषधी प्रयोग गरि यसरी निकालौ ।
के खाने र के नखाने पत्थरी भएमा ? पत्थरी सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण जानकारी
पत्थरी अव्यवस्थित खानपान र जीवनशैलीको कारणले गर्दा लाग्ने रोग हो । पत्थरीबाट बच्नको लागी के खाने के नखाने भन्ने बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ । पत्थरी बढ्दै गएमा औषधी वा शल्यक्रिया गर्नुको अन्य उपाय छैन् ।
पछिल्लो समयमा धेरैलाई गहतको झोल के हो भन्ने बारेमा जानकारी छैन् । यसलाई पत्थरीको एकदमै राम्रो औषधीको रुपमा लिइन्छ । यसको झोल खानाले पत्थरीलाई गलाउने काम गरी बाहिर निकाल्दछ ।
२. फूलगोभी , भन्टा, च्याउ, फर्सी लगायतका खानेकुरा पनि खानुपर्दन् यसमा युरिक एसिड बनाउने प्युरिन,न्युक्लयोटाइडको मात्रा प्रसस्त हुन्छ र किस्टल बनाई पत्थरीको समस्या उत्पन्न गराउँछ ।
Topics #पत्थरी #पत्थरी हुनुका प्रमुख कारण #मृगौला #मृगौलाको पत्थरीको
Don't Miss it सावधान ! यी रोगीले लसुन कहिल्यै प्रयोग नगरौ नत्र ज्यान पनि जान सक्छ
Up Next कोदो खाँदा क्यान्सर, मुटुरोग र मधुमेहबाट पनि जोगाउँछ, यस्तो फाइदा
आफ्नाे लागी कसरी अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
हामी सबै अवसरकाे पर्खाइमा हुन्छाै । तर यत्तिकै बसेर अवसर आउदैन । यसकाे लागी प्रयास गर्न जरूरी छ । एउटा…
गर्मीमा स्वस्थ रहन यी कुराहरुलाई ध्यान दिनुहोस्
– घामको ‘अल्ट्राभाइलेट’ किरणले आँखालाई धेरै असर गर्छ । यो प्रकाशले आँखामा मोतियाविन्दुको समस्यासम्म आउनसक्छ । गर्मीमा घामको सिधा प्रकाश…
आँखामा आनो निस्किएको छ ? यसबाट बच्ने केहि घरेलु उपाय, यस्ता छन्
घरेलु उपाय अम्बाका पात अम्बाका चारवटा पातलाई पानीमा मज्जाले उमाल्नुस् । त्यसपछि त्यो पानीलाई मनतातो बनाएर आँखा सेक्नुस् । दिनमा…
के तपाई बिहान किसमिस पानी पिउनु हुन्छ ? यसका अचम्मका फाईदाहरु
अङ्गुरलाई सुकाएर सुख्खा फलमा समावेश किसमिस तयार गरिन्छ । यसमा अङ्गुरको सबै गुुण पाइनुको किसमिसको प्रयोग हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरै फाईदाजनक छ…
गर्मीमा राम्रो निद्राका लागि तल उल्लेख गरिएका खानेकुरा खानुस्
अनुहारमा यस्ता संकेत देखिएमा, तत्कालै चिकित्सक कहाँ जानुपर्ने हुन्छ
१. सेतो दाग – अनुहारमा सेतो दाग हुनु क्याल्सियमको कमीको संकेत हुनसक्छ । साथै यो आयरनको कमी वा पेटमा जुका रहेको…
किन र कसरी खाने ? जाडोमा बाँसको तामा
बाँसको तामा, हाम्रो रैथाने परिकार हाे । हुन त अहिले यसको सिजन होइन । यद्यपी जाडो याममा बाँसको तामाको परिवार…
खलासीको काम गर्दा गर्दै रजनीकान्त सुपरस्टार बने भने प्रयाश गर्ने हो भने, म चाँही कसो केही बन्न नसकुला र ?
– खलासीको काम गर्दा गर्दै रजनीकान्त सुपरस्टार बने । – ड्राइभरको काम गर्दा गर्दै एल्विस प्रिस्ले विख्यात गायक बने ।…